आन्तरिक द्धन्द्धले कालिञ्चोकको विकास प्रभावित, किन टिक्दैनन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ? – Mission Khabar
आन्तरिक द्धन्द्धले कालिञ्चोकको विकास प्रभावित, किन टिक्दैनन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ?
मिसन खबर १९ पुष २०७५, बिहीबार ०४:४४
सुरज बस्नेत । चरिकोट– दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण विकास निर्माण तथा दैनिक प्रशासनिक काम प्रभावित भएको लामै समय भयो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको चरम द्धन्द्ध अनि छोटो समयमै फेरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत । यसले गाउँपालिकाको काम कारबाही प्रभावित पारेको छ ।
अध्यक्षको अनुपस्थितिबाट काम प्रभावित भएको बताउने कर्मचारी नै सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको बताउँछन् । केन्द्रको विषयलाई लिएर सुरु भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको बिवाद झनै बढिरहेको छ । अहिले उनीहरु सहयात्री हैन एक अर्काका सत्रु जस्ता बन्दा स्थानीयहरु आजित छन् । अर्को अचम्म त १८ महिनामा ४ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । गाउँपालिका स्थापना र जाप्रतिनिधी पुगेको दुई वर्ष पनि नपुग्दै ४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन हुँदा स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेको छैन । सुरुमा नवराज ओली गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएकोमा तीन महिना नपुग्दै छिमेकी गाउँपालिकामा सरुवा भए । अनि आए अधिकृत सुरज अर्याल गाउँपालिकाको किचलो र झगडाबाट आजित भएपछि उनीपनि ६ महिनामा सरुवा मिलाएर गए । अचम्मको कुरा त उनले उनले आफ्नो कार्यकालमा एक महिना मात्रै हाजिर गरेको रेकर्ड छ ।
गत बैशाखमा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर आएका बालकृष्ण हुमागाई पनि करिव ६ महिनामै सरुवा भएका छन् । यसपछि आएका रामप्रसाद पोखरेल पनि करिब दुई साता हाजिर मात्रै गरेर फर्किएपछि अहिले गाउँपालिका निमित्त प्रमुखको भरमा चलेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीचको किचलो अनि प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भैरहने समस्या यसले गाउँपालिकाको चालु वर्षको योजना, कार्यक्रम र बजेट प्रभावित भएको छ । जिल्लाका अन्य ८ वटै स्थानीय तहले विकास र चालु बजेटको दोस्रो किस्ता लगिसक्दा कालिञ्चोक गाउँपालिकाले पहिलो किस्ता वापतको काम पनि गर्न सकेको छैन ।
गाउँपालिकाले प्रत्येक तिन महिनाको अवधिमा बित्तिय समानिकरणतर्फ ३ करोड २९ लाख ५० हजार र सर्शत अनुदानतर्फ ४ करोड १० लाख गरी ७ करोड ३९ लाख ५० हजार बजेट पाउँदै आएपनि निकासा लैजानु पर्दछ । पहिलो तीन महिनाको खर्च फाँटवारी र प्रगति विवरण बुझाउन सकेको छैन । जसका कारण दोश्रो किस्ता निकासा गराउन सकेको छैन । कोलेनिकाले स्थानीय सरकारलाई एक आर्थिक बर्षमा चार किस्ता गरी रकम निकासा गर्दै आएको छ ।
अध्यक्ष विनयकुमार थामी गाउँपालिकाको समस्या बारे बुझ्न खोज्दा बेमतलबी बनिरहेका छन् भने उपाध्यक्ष कालिका पाठक नेतृत्वको विवादमा कर्मचारी मुछिन आवश्यक नभएको भन्दै कर्मचारीहरु जिम्मेवार नहुँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको आरोप लगाएर पन्छिरहेकी छिन् । जनताको मतबाट उनीहरुको विकास र सेवा सुविधाको अपेक्ष पुरा गर्छु भन्ने बचनबद्धता गरेर स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगेकाहरुलाई आफ्नो यस्तो रबैयाले कत्ति पनि लाज लागेको छैन ।
सरकार स्थानीय सरकार गाउँमा पुर्याएको दाबी मात्रै गरेर त जनताले राहत पाउँदा रहेनछन नी । गाउँका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दैन ?
क्याटेगोरी : जनप्रतिनिधि, समाचार
गठनको ८९ दिनपछि देउवा सरकारले पायो पूर्णता, यी हुन मन्त्रीहरु…
सर्वदलीय बैंठकमा किन उपस्थित भएनन विपक्षी दलका नेता ओली ?…
कांग्रेसको पालिका अधिबेशनमा चरम ब्यतिथि, मदनबहादुर अमात्यले खेले यस्तो खेल